Nnukwu mmeri ise na Transportation
Anyị achịkọtara ebuka nke nwere nnukwu uru na Transportation. Akụkụ ndị a dị iche n'ọtụtụ akụkụ yana ọ bara uru ịmụ ha ka ha ghọta ihe dị iche na ikekwe kọwaa ohere itinye ego ọhụụ. Eziokwu na ngwaahịa na-akwụ elu apụtachaghị na ọ ga-aga n'ihu, mana nke ahụ bụ eziokwu mgbe ụfọdụ. Ọ dịkwa mkpa inwale mkpebi nke ego ọ bụghị dabere na eziokwu na ngwaahịa na-aga n'ọtụtụ na ụbọchị enyere, kamakwa ịtụle ihe ndị ọzọ dịka isi ahịa ya, mmasị ugbu a na ngwaahịa (oke ngwaahịa), ụtụ ya. yana uru na n’ozuzu ya ọ bụ uto / mbelata nke ihe n’ogologo oge (ọ bụghị naanị otu ụbọchị). Ya mere, ka anyị lelee nnukwu mmeri ise a nke ụbọchị:
Expeditors International of Washington nwere uru nke 1.47%. Companylọ ọrụ a nwere okpu ahịa $ 12.96B. N'ime izu gara aga naanị, ngwaahịa gbanwere site na -3.97%. N’ọnwa gara aga site na -10.02%, na afọ gara aga site na -10.33%. Na akụkọ ego ikpeazụ ọ nwetara, ọ kọrọ ego nke $ 8.138B site na mmụba ego nke 17.59%. Onu ahia buru ibu gabigara na $ 2.620B.
Enwere ike ịtụle ihe ndị ama ama na ngwaahịa site na ọnụ ọgụgụ azụmaahịa a na-ere n'otu ụbọchị. Maka EXPD, ọnụ ahịa ahụ ruru ka olu nke 894501.
DHT Holdings nwere uru nke 1.46%. Companylọ ọrụ a nwere okpu ahịa $ 0.86B. N'ime izu gara aga naanị, ngwaahịa gbanwere site na -3.19%. N’ọnwa gara aga site na -11.77%, na afọ gara aga site na 28.10%. Na akụkọ ego ikpeazụ ọ nwetara, ọ kọrọ ego nke $ 0.376B site na mmụba ego nke 5.88%. Onu ahia buru ibu gabigara na $ 0.138B.
Enwere ike ịtụle ihe ndị ama ama na ngwaahịa site na ọnụ ọgụgụ azụmaahịa a na-ere n'otu ụbọchị. Maka DHT, ọnụ ahịa ahụ ruru ka olu nke 965538.
Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A. B. de C. nwere uru nke 1.26%. Companylọ ọrụ a nwere okpu ahịa $ 6.04B. N'ime izu gara aga naanị, ngwaahịa gbanwere site na -1.17%. N’ọnwa gara aga site na -10.18%, na afọ gara aga site na 7.00%. Na akụkọ ego ikpeazụ ọ nwetara, ọ kọrọ ego nke $ 0.721B site na mmụba ego nke 14.62%. Onu ahia buru ibu gabigara na $ 0.595B.
Enwere ike ịtụle ihe ndị ama ama na ngwaahịa site na ọnụ ọgụgụ azụmaahịa a na-ere n'otu ụbọchị. Maka PAC, ọnụ ahịa ahụ ruru ka olu nke 56781.
Brinks Company (The) nwere uru nke 1.25%. Companylọ ọrụ a nwere okpu ahịa $ 4.22B. N'ime izu gara aga naanị, ngwaahịa gbanwere site na -9.48%. N’ọnwa gara aga site na -21.55%, na afọ gara aga site na -10.57%. Na akụkọ ego ikpeazụ ọ nwetara, ọ kọrọ ego nke $ 3.489B site na mmụba ego nke 4.24%. Onu ahia buru ibu gabigara na $ 0.786B.
Enwere ike ịtụle ihe ndị ama ama na ngwaahịa site na ọnụ ọgụgụ azụmaahịa a na-ere n'otu ụbọchị. Maka BCO, ọnụ ahịa ahụ ruru ka olu nke 505078.
J.B. Hunt Transport Services nwere uru nke 0.89%. Companylọ ọrụ a nwere okpu ahịa $ 9.88B. N'ime izu gara aga naanị, ngwaahịa gbanwere site na 0.26%. N’ọnwa gara aga site na -2.90%, na afọ gara aga site na -21.30%. Na akụkọ ego ikpeazụ ọ nwetara, ọ kọrọ ego nke $ 8.615B site na mmụba ego nke 19.82%. Onu ahia buru ibu gabigara na $ 3.367B.
Enwere ike ịtụle ihe ndị ama ama na ngwaahịa site na ọnụ ọgụgụ azụmaahịa a na-ere n'otu ụbọchị. Maka JBHT, ọnụ ahịa ahụ ruru ka olu nke 1088982.